သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> သားရေအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို -> သားရေစက်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan သားရေစက်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဒါဟာနှစ်ဆသောစလွယ်ကိုဆွဲချုပ်စ​​က်ကိုအဘို့ဖြစ်၏။ စံလှည့်လည်ပွိုင့်။ စက်ချုပ်အပ်ချည်အနည်းငယ်မြင့်သည်။ ထိုသို့သောတဲများ, ကင်းဗတ်, ကုလားထိုင်ကူရှင်တွေ, သားရေအဝတ်အထည်နှင့်လက်အိတ်များအဖြစ်, လေးလံသောအလေးချိန်သည့်ပစ္စည်းများချုပ်များအတွက်သင့်လျော်မယ့်ပျော့ပျောင်းနှင့် leather.Equivalent စနစ်များပါဝင်သည်: 82X3, SY1242 ။